पूर्वडीआईजी रमेश खरेल नयाँ दल खोल्दै…हेर्नुहोस!::Point Nepal
पूर्वडीआईजी रमेश खरेल नयाँ दल खोल्दै…हेर्नुहोस!
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेशप्रसाद खरेलले नयाँ दल खोल्‍ने भएका छन् । पार्टी स्थापनाको उद्देश्यले उनले ‘हाम्रो नेपाल हामी नेपाली’ अ’भियान आफ्नै सं’योजकत्वमा स्थापना गरेका हुन् । अभियानको औपचारिक घो’षणा भने बिहीबार एक कार्यक्रमबीच गरिने खरेलले बताए ।
खरेलले भ्र’ष्टाचारविरोधी अ’भियान, सु’शासन, रा’ष्ट्रहित, नागरिकका हक अधिकारलाई के’न्द्रमा राखेर अ’भियानलाई स’क्रिय बनाइने बताएको खबर कान्तिपुरले लेखेको छ । सुरुमा ६ महिनासम्म सं’गठनलाई अभियानको रुपमा ज’नतामाझ लै’जाने र त्यसपछि प्राप्त स’ल्लाह, सु’झावअनुसार राजनीतिक द’लका रुपमा अघि ब’ढाउने यो’जना रहेको खरेलले बताए।
२०७४ माघ २८ गते प्रहरी महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई ब’ढुवा गरिएपछि खरेलले प’दबाट रा’जीनामा दिएका थिए। खरेल सं’योजक रहेको अ’भियानमा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वकायममुकायम सचिव देवेन्द्र सिटौला, आफूलाई भ्र’ष्टाचारविरोधी अभियन्‍ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाही लगायत पनि आ’बद्ध छन्।
अभिव्यक्ति र का’र्यशैलीका कारण वि’वादित शाही नेपालका लागि नेपाली अ’भियानबाट ह’टाइएका व्यक्ति हुन्। पूर्वप्रशासक, पूर्वसुरक्षाकर्मी, पूर्वप्राध्यापकलगायतलाई पनि सं’गठनमा ल्याउनेबारे छ’लफल भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि पहिलो घो’षणा सभामा भने पूर्वडीआईजी खरेल र पूर्वसचिव सिटौला रहनेछन्। कान्तिपुर दैनिक